सित्तैमा ल्वाङ पनि नखाएको रवि लामिछाने भनाइमा भेटियो ठूलै भ्वाङ, सित्तैमा कार चढेको खुलासा
१२ भदौ, काठमाडौँ । न्यूज २४ टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने वेलकम एडभरटाइजिङको ‘सिधाकुरा जनतासंग’ कार्यक्रमका प्रस्तोता एवं पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या दुरूत्साहनका अभियुक्त रवि लामिछानेले धरौटीमा छुटेको भोलिपल्ट चितवनको नारायणी नदीको
टानको अध्यक्षमा वापन्थीले सर्वसम्मत उम्मेवार छान्न सकेनन्, थापाको नाममा संगठनको आपत्ति
११ भदाै, काठमाडाैँ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसियसन अफ नेपाल ( टान ) को ४१ औँ वार्षिक साधारणसभा मार्फत चुनिने नयाँ नेतृत्वका लागि वामपन्थीहरू सर्वसम्मत उम्मेदवार चयन गर्न असक्षम भएका छन
भ्रष्ट जनप्रतिनिधिका लागि चुनाैति बन्दै लीलाकुमार, जो आफ्नो तलब समेत समाजसेवामा लगाउछन
१० भदाै, खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ दोर्पा बुवालुङका वडाध्यक्ष लीलाकुमार चौहानले राज्यबाट आफूले पाएको तलबभत्तावापतको रकम सामाजिक सङ्घसंस्थालाई प्रदान गर्नुभएको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष चौहानले
-नारायण नेपाल जीवनको दुःख पनि अनेक हुने । कहिलेकाहीँँ त आर्यघाटको धुवाँँमा उडेको जीवनका सप्तरंगी सपना देख्दा लाग्छ के लेख्नु र कसका लागि लेख्नु ! दुनियाँँको कथाव्यथा उतारेर दलाल र
२ भदौ, काठमाडौँ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्याका कारण बनेका न्यूज २४ टेलिभिजनका प्रस्तोता रवि लामिछानेलाइ कारबाहीबाट जोगाउनका निम्ति भिड सिर्जना गरेर संघर्ष समिति बनाएका अध्यक्षले नै सोमबार अध्यक्ष पदबाट
१९ साउन, काठमाडाैँ । नेकपाका नेता एवं प्रदेश नम्बर ३ का प्रदेशसभा सांसद बद्री मैनालीले समाजसेवामा अब्बलता प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको सानो समस्यामा समेतसँगै हुने मैनालीले
१९ साउन, काठमाडाैँ । राजधानी आउने अधिकांश पर्यटकको गन्तव्य भक्तपुरको नगरकोट हुने गर्छ । नगरकोटबाट देखिने हिमशृङ्खलाको स्वाद बेग्लै हुन्छ तर आकर्षक पर्यटकीय नगरी पुग्ने सडक भने वर्षौंदेखि उबडखाबड र
१८ साउन, काठमाडाैँ । नख्खु कारागारमा शुक्रबार भएको हत्या पक्ररणको अनुसन्धान भैरहेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका डिएसपी नारायण चिमोरियाको टोलीले अनुन्धानको क्रममा हत्यारासँग पनि वयान लिएका छन ।
१६ साउन, काठमाडाैँ । बैतडीको पाटन नगरपालिकामा धुरदेखि सौटुडा दुकानसम्म बाटो बनेको छ । ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको हिँटी–जयरामघाट मोटरबाटो मर्मतसम्भार भएको छ । चितवनको माडी नगरपालिकामा पर्यटकीय क्षेत्र सोमेश्वरमा पर्खाल लगाइएको
संघीयतामा गलगाँड ! प्रदेश २ को सरकारद्धारा केन्द्र सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
१६ साउन, काठमाडाैँ । सङ्घीय सरकारले नेपालको संविधान विपरीत वन संरक्षण कम्पनी आफ्नो मातहातमा ल्याउन खोजेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रदेश नं २ सरकारको
१६ साउन, इटहरी । इटहरी, इटहरी वडा नम्वर दुईको तामाङ्गचौकको एउटा घर,एउटै कोठाको चार कुनामा चारै ओछयानमा चार जना छोरा छोरी सुतिरहेका छन । १४ देखि २९ बर्षसम्मका दुईछोरा र
पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सक्ने घोषणा गरेको सरकार भूकम्पको चार वर्ष नाघ्दा पनि तथ्यांक संकलनमा
१५ साउन, काठमाडाैँ । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले पुनःनिर्माणको बाँकी काम पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सदाचार विषयमा सञ्चार
रौतहटकाे मठिया प्रहरी चौकीमा विष्फोट